Bayern Munich Oo Xasuuqday Besiktas Iskana Xaadirisay Sideed Dhamaadka CL [Sawiro] %
Champions LeagueGermanyLatest Sports News
Kooxda kubada cagta Bayern Munich, ee ka dhisan wadanka Jarmalka ayaa waxay iska xaadirisay wareega Sideed dhamaadka ee tartanka Champions League, kadib markii ay labadda lugood ay dhagaha kasoo tumeen dhigooda Besiktas.
Naadiga reer Germany ayaa waxay ugu soo awood sheegatay dhigeeda Turkiga ka dhisan wadar ahaan labadda lugood 8-1, waxaana guul ay kaga gaareen gurigooda oo ay Isbuucii hore ku qaabileen iyo waliba caawa oo ay banaanka booqdeen.
Ciyaartii caawa ka dhacday garoonka lagu magacaabo Vodafone Arena, oo ay leedahay Besikas, ayaa waxay kusoo dhamaatay 3-1, oo ay guusha ku raacday Bayer, waxaana xusid mudan in goolasha mid kamid ah ay iska dhaliyeen wiilasha martidda loo ahaa.
Thiago Alcantara, ayaa bandhiga kulanka daah-furay kadib markii uu dhaliyay goolkii ugu horeeyay ee kulankaan daqiiqadii 18aad ee qeybta koowaad, Gökhan Gönül oo Besiktas udheela ayaa gool iska dhaliyay daqiiqadii 46aad.
Goolka saddexaad ayaa waxay ka heshay Bayer ciyaaryahanka lagu magacaabo Sandro Wagner, ka hor inta uusan gool usoo celin Besiktas, ciyaaryahanka lagu magacaabo Vanger Love, kaasoo ciyaarta ka dhigay 2-1 ka hor goolka Wenger.
Bayer ayaa kubada haysata inta uu kulanku socday 51%, taasoo ka dhigan inay ahayd mida awooda sara ama gacanta sare ee kulanka lahayd, waxaana intaas dheer in la bixiyay Shan Kaar oo Jaalo ah, kuwaasoo saddex kamid ah Besiktas ka siiyay, labada kalena aa Bayer.
Sikastaba, Bayer ayaa waxay ku biireysaa liis kooxo ah, kuwaasoo gaaraya illaa iyo Lix, islamarkaana ay ugu waa weyn yihiin Real Madrid iyo Manchester City, iyadoona caawa la sugayo mida soo baxda midkood Barcelona iyo Chelsea.
Besiktas vs Bayern MunichChampions League